Mpitsara 3: 1-31
Mpitsara 2 Mpitsara 3 Mpitsara 4
dia ireo andriana dimy tamin'ny Filistina sy ny Kananita rehetra sy ny Sidoniana ary ny Hevita, izay nonina tany an-tendrombohitra Libanona, hatrao akaikin'i Bala-hermona ka hatramin'ny làlana mankany Hamata.
Ary naka ny zanakavavin'ireny ho vadiny izy sady nanome ny zanani-vavy ho vadin'ny zanakalahin'ireny ka nanompo ny andriamaniny.
Dia nirehitra tamin'ny Isiraely ny fahatezeran'Jehovah, ka nivarotra azy ho eo an-tànan'i Kosan-risataima, mpanjakan'i Mesopotamia, Izy; dia nanompo an'i Kosan-risataima valo taona ny Zanak'Isiraely.
Dia nampiangona ny taranak'i Amona sy Amaleka ho any aminy izy, ary nadeha izy ireo ka namely ny Isiraely, dia nahafaka ny tanàna be rofia.
Dia nitondra ny fanomezana ho an'i Eglona, mpanjakan'i Moaba, izy; ary lehilahy matavy be Eglona.
Fa nony tonga teo amin'ny fihadiam-bato izay any Gilgala kosa izy, dia niverina ka nanao hoe: Misy teny holazaiko mangingina aminao ry mpanjaka ô. Dia hoy kosa izy: Mialà kely hianareo, rizareo. Ary izay rehetra nitsangana teo anoloany dia niala teo aminy.
Ary naninjitra ny tànany ankavia Ehoda ka nandray ny sabatra teny ambalahany ankavanana, dia natsatony tamin'ny kibon'i Eglona izany;
Ary rehefa nivoaka izy, dia tonga teo kosa ny mpanompon'i Eglona; ary raha hitany fa, indro, voahidy ny varavaran'ny tilikambo, dia hoy izy: Miavela ato an-tilikambo fihatsiatsiahana izy aloha.
Ary hoy izy taminy: Manaraha ahy, fa efa natolotr'i Jehovah eo an-tànanareo ny Moabita fahavalonareo. Dia nidina nanaraka azy ny olona, ka azony ny fitana any Jordana hankany Moaba, ary tsy nisy navelany hita na dia iray akory aza.
Dia resin'ny tànan'ny Isiraely ny Moabita tamin'izany andro izany. Ary nandry valo-polo taona ny tany.
Ary nanarakaraka azy Samgara, zanak'i Anata, izay namely ny Filistina enin-jato lahy tamin'ny fanindronan-omby, dia namonjy ny Isiraely koa izy.